Taxanaha Gurbiye iyo 100 suaal
Cali Jabiin"Siyaasay: Sayid Cali iyo Sayid Cumar sabankoodi joogtaye,meelay Soohdin kuu taal ma jirtaa ku simantahay"?!!
Soomalida waa dad Cilmi dhagoodka aaminsan, dhaxal soo jireen ah ayuu noqday,qofka soomaliga waxaa uu si sahal ah ugu murmayaa Cilmi walba,ma jiraan waxa loo yaqaano Ixtiraamidda Takhasuska,waxaa soo baxay Ummad wada Culuma u diin ah,20 jir Iftoonaya!,Ummad wada Dhkhaatiir ah,kalkaaliye qaliin sameeya!,Saxaafaddii waa la wada bawsaday!,ma jiro Cilmi laga xishooday.....Siyaasadda ayaa ka mid ah culuumtaas la boobay,barasho ma jirto oo waa dhaxal..!
Waxaad si fudud ku noqon kartaa Siyaasi waase hadii:Maka dhalatay Qoys Halgamaa ah?!,Xaq u dirir iyo Mujaahidiin?!,Ma taageersantahay dadka Xamar baarashuudka ku yimid?!,Culuma u diinka mala dirir santahay?!,Makaa nabad galayaan wadamada aan walaalaha nahay ee Dariska?!,maku qanacsantahay in la iska cabo dhiiga shacabka?!,Ma Ilaalinee danaha wadama aan Saxiibka nahay ee Reer Galbeedka?!,Ma Ilowday Ereyga Soomaliweyn?!,Sow Argigixiso ma ahan qokii wali ku dambeyso Wadaniyad,Diin jacayl....?!
Cali Axmed Qaasim(Jabiin) oo ah Gabyaa Soomaliyeed ayaan mar wax ka waydiiyay bal hadii uu Qeexid u heli karo Ereyga siyaasadda ee Madaxa naga cunay,haduu jiro Gabay ama geeraar uu ka mariyay Siyaasadda ,waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa qeyb ka mid ah sheeko dheer oo dhex martay Gabyaaga iyo Siyaasad,isagoo hadlakiisa ku bilaabay:
Cali Jabiin:"Siyaasay: Somali aan ahay,seef kuma Islaamine,saldhigaada waa maxay?,Saxiibkaa Ma jeceshay?,Sadbursiga ma neceb tahay?,Saqda dhexe ma Hurudaa?Sabar iyo dulqaad iyo saamaxaad ma leedahay"?!
Siyaasad:Waxaan ahay Sir iyo Been,waxaan ahay Sun iyo Cudur,Saacado nin ila jiro,Sakaraatul mowd iyo Su'aal kuma Xisaabtamo.
Cali Jabiin:"Siyaasay sumaysanaay,aduunyadan Ilaah kama Sariigane,inaay arintu saas tahay Sax miyaa ma Sugan tahay"?!
Siyaasad: "Ninka igu Sirmaayoow sadex Saan gadaal u bax,Sooryadeydu waa dhiig,Sabab iyo Wadaan ahay"!
Cali Jabiin:" Saldhig ma leh adduunyada,Safaraan ku joogaa,Socodaan ku marayaa,Sahay inaan ka qataan rabaa seen wax yeelaa"?!
Siyaasad:"Saliga iyo Quraanka iyo Sabar yaan lagaa badin,Salaadana ka dhigo Sahay,Saacadda su'aasha iyo Siraadka uga gudbeysaa".
Cali Jabiin:"Siyaasay: Sayid Cali iyo Sayid Cumar Sabankoodi joogtaye,meelay soohdin kuu taal,ma jirtaa ku simantahay"?!
Siyaasad: Intey Dunida saan tahay,Aadanaha saqaafaa,Suurka laga afuufaa,Saan iyo kasii daran,Saban Aakhiro i Saacido.
Cali Jabiin"Hadaad tahay Sir iyo Been ha i sugin Siyaasay,Hadaad tahay Sun iyo Cudur ha i sugin Siyaasay,...Seef kuma Islaamine ha i sugin Siyaasay!
Mise Xal Sadexaad ayaad Haysaan?!!: 16-sano oo dagaalo, 16-shir iyo 6- madaxweyne... Akhri...